10:02 am NST
आज प्रजातन्त्र दिवस, बिभिन्न कार्यक्रम गरी मनाईंदैछ । विक्रम संवत २००७ साल फागुन सात गते जहानियाँ राणा शासनको अन्त्य भएर देशमा प्रजातन्त्र स्थापना भएको दिनको सम्झनामा हरेक वर्ष आजकै दिन प्रजातन्त्र दिवस मनाइन्छ ।
सरकारले काठमाडौंको राष्ट्रिय सभागृहमा कार्यक्रम गरी ६३ औं प्रजातन्त्र दिवस मनाएको छ । गृह मन्त्रालयका तर्फबाट आयोजित कार्यक्रममा प्रमुख अतिथिका रुपमा पुग्नुभएका प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले २००७ सालमा प्राप्त उपलब्धिलाई पूर्णता दिनु नै वर्तमान संक्रमणको चुनौती भएको बताउनुभयो ।
उपप्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छदारले प्रजातन्त्र दिवस नै जनताले उन्मुक्ति पाएको खास दिन भएको भन्दै त्यस यताका उपलब्धि त्यसका विकसित रुप मात्र भएको टिप्पणी गर्नुभयो । प्रजातन्त्र दिवसको अवसरमा शुभकामना व्यक्त गर्दै राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले राष्ट्रिय सहमतिको आधारमा जतिसक्दो छिटो संविधानसभाको चुनाव गर्नु–गराउनु एकमात्र विकल्प भएको बताउनुभएको छ ।
त्यस्तै पुर्बराज ज्ञानेन्द्र शाहले पनि प्रजातन्त्र दिबसको अबसरमा शभकामना दिनुहुदै मुलुकलाई स्वाधिन , सबल, सक्षम, शान्त र समुन्नत बनाउन सबैले आत्मबोध गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ । प्रजातन्त्रमा दण्डहिनताको अन्त्य, बिधिको शासन र मानबअधिकार हुनुपर्नेमाउहांले जोड दिनुभएको छ ।।।।।।